Moulmein Kitchen: Fish curry with cherry tomatoes
Posted by Moulmein Kitchen at Saturday, January 09, 2010
Vista, January 9, 2010 at 11:36 AM
ူSeems Yummy !!
Evy, January 9, 2010 at 6:39 PM
Looks delicious..Wanna taste it!
Moulmein Thu, January 10, 2010 at 4:04 PM
Thanks Vista and Evy :)
လုလု, February 22, 2010 at 10:21 AM
စားလို့ကောင်းမယ့်ပုံပဲနော်။ မော်လမြိုင်ဘယ်အရပ်မှာ နေတာလဲမသိဘူးနော်။ မမလုလည်း မော်လမြိုင်ကပဲနော်။ မရမ်းကုန်းရပ်မှာ နေတာပါနော်။
Moulmein Thu, March 1, 2010 at 10:34 AM
အလည်ရောက်လာတာ ကျေးဇူးနော် မမလု :)
မမလုရဲ့ မီးဖိုချောင်ကိုတော့ အလည်ရောက်ဖူးနေကြပါ။
မော်လမြိုင် ဆေးရုံကြီးနားမှာ နေခဲ့ဖူးတယ်ဆိုတာကိုတော့သိပါတယ်..။
ဖေဖေက အဲဒီမှာတာဝန်ကျတာဆိုတော့။ ညီမ အသက်၃နှစ်လောက်မှာ ရန်ကုန်ပြောင်းလာတာဆိုတော့ အရပ်နာမည် မေမေတို့ကို မေးကြည့်မှပဲသိရမှာပါ..။ မမလည်း မော်လမြိုင်သူနော်.....တွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ် အမရေ....